Mootummaan Turkii, "mootummaa Miyaanmaar irratti tarkaanfii fudhachuuf qophiidha" jedhe. - NuuralHudaa
Mootummaan Turkii, “mootummaa Miyaanmaar irratti tarkaanfii fudhachuuf qophiidha” jedhe.
Last updated Feb 26, 2018 66
Pirezdantiin Turkiyaa Rajab Xayyib Erdogaan, Kora dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dhuma ji’a kana keessa Niiwuyoorkitti geggeeffamu irratti, ajjeechaa muslimoota Roohingaa irratti raawwatamaa jiru kan dhiheessu tahuu ibse.
” Addunyaan duguuggaa sanyii Muslimoota Miyanmaar irratti raawwatamaa jiru osoo argan callisaa jiru; Kora mootummoota Gamtoomanii kan Fulbana 19 magaalaa Niiwuyoorkitti geggeeffamu irratti dhimma kana ilaalchisee mootummoota Addunyaa waliin dubbatuuf teenya!”
Rajab Xayyib Erdogaan
Akkasumas Dhaabbanni mootummoota Gamtoomanii Mootummaa Miyanmaar irratti tarkanfii kan hin fudhanne taanaan, Turkiyaan waraana isii gara Miyanmaar erguuf qophii tahuu ibsite.
July 7, 2022 sa;aa 8:06 am Update tahe